राजपाका तीन शीर्ष नेताको जिल्लामा को बलियो ? - निर्वाचन - साप्ताहिक
राजपाका तीन शीर्ष नेताको जिल्लामा को बलियो ?
- अमन कोइराला
प्रदेश नम्बर–२ को एउटा महत्वपूर्ण जिल्ला सर्लाहीका १७ वटा स्थानीय तह अब २० पुगेका छन् । सर्लाही प्रदेश नम्बर–२ का ८ जिल्लामध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का मुख्य नेता बढी भएको जिल्ला हो । राजपा अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो तथा महेन्द्र राय यादवको गृह जिल्ला भएकाले सर्लाहीको निर्वाचनबाट राजपाले बढी अपेक्षा राखेको छ । भर्खरै एकीकरण भएकाले राजपाले चुनावमा एकता प्रदर्शन गर्न सके जिल्लामा सबैभन्दा बलियो पार्टी हुने आँकलन गरिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा राजपाको राम्रो पहुँच छ ।
निरन्तरको आन्दोलन पछि चुनावमा जान लागेकाले पनि राजपाको संगठन गाउँ–गाउँसम्म छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा राजपाको टिकट लिन चाहनेहरू निकै छन् ।
एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र पनि मधेस बहुल क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न कम्मर कसेर लागेका छन् । राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रकै बोलवाला छ । बागमती, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर तथा बरहथवा नगरपालिकामा मुख्य पार्टीहरूकै बर्चस्व देखिन्छ । यद्यपि सर्लाहीका २० तहमध्ये अधिकांशमा भने राजपा नै बलियो सावित हुने अवस्था छ ।
राजपामा समेटिएका पार्टीहरूबीच विवाद नभए अधिकांश तहमा यही पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । राजपा आबद्ध दलका केन्द्रीय अध्यक्षहरूको जिल्ला भएकाले पनि बढीभन्दा बढी तहमा जित्नै पर्ने दबाब यो पार्टी नेतृत्वमाथि छ ।
एमाले मिश्रित बसोबास भएको राजमार्ग क्षेत्रमा उता बलियो छ । कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले भने दक्षिणी भेगमा समेत पकड जमाउने प्रयास थालेका छन् । माओवादीले चुनाव अघि नै फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर रायलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने भएको छ । कांग्रेसले भने आफ्नो पुरानो संगठन क्षेत्र नै मधेस भएकाले बढी सिट जित्ने दाबी गर्दै आएको छ । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा जिल्लाका ७ क्षेत्रमध्ये २ क्षेत्रमा जित हात पार्ने कांग्रेस मात्र थियो ।
त्यस क्रममा एमाले तथा माओवादीले १/१ सिट मात्र जितेका थिए । मधेसवादी दलमध्ये तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले १/१ सिट जितेका थिए । त्यतिबेला मधेसवादी दलको पराजयमा उनीहरूबीचकै प्रतिस्पर्धाले बढी भुमिका खेलेको थियो ।
मधेसवादी दल मिलेर उठ्दा कम्तीमा ४ क्षेत्रमा जित्ने अवस्था चुनावी परिणामले देखाएको थियो । मधेसवादी दलबीचको प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाउँदै मुख्य दलले ४ स्थानमा कब्जा जमाएपछि मधेसवादीहरू २ स्थानमा थन्किएका थिए । अहिले केही मधेसवादी दल मिलेकाले स्थानीय चुनावमा भने उनीहरूले बढी सिट जित्ने संभावना प्रकट गरिँदैछ ।
सर्लाहीमा संघीय समाजवादी फोरमपनि बलियो मानिन्छ । पछिल्लो समय राजपा मात्र आन्दोलनमा भएकाले मधेसी जनताको समर्थन भने राजपातर्फ नै बढी छ । यहाँ लोकतान्त्रिक फोरमको खासै प्रभावकारी संगठन पनि छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राय माओवादीमा प्रवेश गरेपछि लोकतान्त्रिकको संगठन थप कमजोर हुने निश्चित छ ।
एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र मधेसमा बढी सिट जितेर आफूलाई मधेसी जनताको पक्षधर देखाउने होडमा छन् । उता राजपा मधेसमा एकक्षत्र जित दर्ज गराएर मधेसी जनताले रुचाएको र मधेसको पक्षमा काम गर्ने सच्चा पार्टी आफू नै भएको देखाउने दबाबमा छ । मुख्य पार्टी तथा राजपा यिनै चुनौती र दबाबबीच सर्लाहीको रणमैदानमा छन् ।